Indiemark dia masoivohon'ny marketing amin'ny mailaka, ary ny asa fandraharahako fahatelo. Ny ezaka roa nataoko voalohany dia natomboka miadana, nitombo ara-nofo, ary soa ihany fa samy roa ireo nifarana tamin'ny Big Bang. Ankehitriny rehefa nivily lalana ny toekarena dia toa nanjary làlana iray ihany i Indiemark.
Hatramin'izao dia nanomboka (fa tsy mbola nahavita) drafitra fandraharahana mahazatra am-polony aho. Fantatrao… ny karazany feno 25 pejy. Heveriko fa noho ny voloko marina loatra na ny tsy faharetako loatra sa izy roa. Ka matetika aho dia manome elatra azy io miaraka amin'ny "drafitra fandraharahana", saingy mangataka mangingina aho fa nanokana fotoana hamaritana ireo paikadiko lavitra sy fotoana fohy amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nandrafitra drafitra fandraharahana hita maso aho.
Etsy ambany no hahitanao ny kinova mirindra. Izy io koa dia miaraka amin'ny Tactical Guide miaraka, izay tsy hita eto. Be ranony loatra.
Azafady… lazao amiko izay hevitrao!
Tags: raharaham-barotratorolàlana ho an'ny orinasaraharaham-barotra drafitraAgence Marketing amin'ny mailakatorolàlana momba ny marketingdrafitra marketingdrafitra fandraharahana hita maso
Manaiky aho - hevitra mahafinaritra ity, raha toa ka miaraka amin'ny antsipiriany “mamy” kokoa (araka ny iantsoanao azy). Tsy maninona izay kendrenao (oh: kapitalista mpiambina, anjely, banky, mety ho mpiasa sns), hitan'ny maso ny olona ary mino aho fa tena mankasitraka ny fahaiza-mamorona amin'ny famoahana karazana atiny nentim-paharazana (oh: drafitry ny orinasa) Asa tsara, Scott! 😀
Apr 29, 2010 ao amin'ny 2: PM PM
Tiako ity. Asa tsara!
Apr 29, 2010 ao amin'ny 7: PM PM
Mizara ny tanjonao aho amin'ny fahazoana ny drafitry ny orinasa ho fohy ary ilaina. Pejy 25? Tsy hisy hamaky mihitsy. Pejy 1? Hapetaka eo akaikin'ny monitor'ny tsirairay izy io ary hodinihina matetika.
Izany dia nilaza fa tsy mino aho fa mandeha ity ohatra ity. TENA tiako ny mamaritra ny tontolo iainana ny mpandray anjara, samy manana ny filany sy ny fitondran-tenany. Na izany aza, mijanona amin'ny haavo avo loatra izany. Sarin-tsary fotsiny io fa tsy drafitra, be loatra ny inona ary iza, tsy ampy amin'ny fomba ahoana.
Drafitra fandraharahana mahomby - ary azo atao amin'ny pejy iray na roa - dia tokony hampifandray ny tanjona ambony sy tanjona amin'ny tetikady sy hetsika manokana. Nihaika ny fisainako ianao tamin'ny fampidirana adihevitra manankarena momba ny Who, fa amin'ny farany, tsy tsapako fa lasa lavitra ianao nanao an'io ho azo atao.
Te-hiady hevitra foana!
Apr 29, 2010 ao amin'ny 10: PM PM
@ marika Marina ny anao. Ity mpanampy maso ity dia tsy manome afa-tsy ny ekipanay (sy mampahatsiahy antsika) ny lain'ny tany, na izao rehetra izao. Ny tsy hita dia ny tanjontsika, ny asantsika ary ny benchmark. Ireo miaina anaty mpamatotra peratra telo miaraka amin'ny soratra hoe 'Tactical Operations'. Izy io koa dia misy lahatsoratra / sary ary fohifohy, saingy azo ovaina sy azo ovaina kokoa.
@Katie sy @Dave Misaotra tamin'ny teny tsara. Tena nankafy sy nandray soa tamin'ity fizotrako ity aho. Fanampin'izay, nahafinaritra ilay izy.
May 9, 2010 ao amin'ny 4: 18 PM
Raha tsy nisy zavatra hafa nahatonga ahy hieritreritra. Vaovao aho amin'ny zavatra drafitry ny orinasa ary manana fotoana kely amin'ny famitana Bp. Ity dia zavatra azoko atao, zavatra tokony hanampy amin'ny famakiana ny sakana izay toa namboariko manodidina ny fikasana orinasa "mahazatra". Indrindra rehefa tsy izany no tiako hananana.
6 Jan 2012 amin'ny 7:50 PM
Mitantara ny zava-misy mba hahafantaran'ny tsirairay ny drafitra / paikady momba ny asa fandraharahana mba hanana fotoana tsara kokoa fanatanterahana fanatanterahana.